Lalao CJSOI 2016 : taranja 5 no hiadiana medaly volamena | NewsMada
Lalao CJSOI 2016 : taranja 5 no hiadiana medaly volamena
Hotontosaina, eto Madagasikara ny 1 ka hatramin’ny 7 aogositra ho avy izao, ny andiany faha-10 amin’ny “Lalaon’ny vaomieran’ny ranomasimbe Indianina” (CJSOI). Fihaonana natokana ho an’ny ankizy 14 – 17 taona. Araka ny tapaka, taranja dimy no hiadiana medaly volamena, amin’ity andiany ity : ny atletisma lahy sy vavy, izay hatao ao amin’ny kianjan’Alarobia. Ny handball, ho an’ny sokajy lehilahy, hotontosaina ao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny judo, lahy sy vavy, hotanterahina ao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Ny baolina kitra lalaovina olona 7, natokana ho an’ny vehivavy, izay hatao eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina ary ny tenisy ambony latabatra, vavy sy lahy, horaisin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
Ankoatra ireo, hisy koa ny fihaonana ara-kolontsaina : ny fihaonamben’ny tanora lahy sy vavy, ny dihy nentin-drazana miaraka amin’ny mozika ary ny tantara an-tsehatra. Firenena 7 no handray anjara amin’izany : i Madagasikara, Kaomoro, Maorisy, Mayotte, La Réunion, Seychelles ary Djibouti.
742 ny isan’ny olona andrasana amin’ity lalao ity, ka 106 isaky ny delegasiona tsirairay. Nambaran’ny minisitra Andriamosarisoa Jean-Anicet, filohan’ny CJSOI sady minisitry ny Fanatanjahantena, fa vonona i Madagasikara handray ny lalao ary efa tafatsangana ny birao mpanatanteraka sy ireo komisiona hikarakara ity “CJSOI 2016”, ity.
Mbola hisy fivorian’ireo manampahaizana, hatao any Mayotte ny 19 – 21 avrily izao, ary ny fivorian’ireo minisitra hatao eto Madagasikara, mialoha ny hanombohan’ny lalao.